Al-shabaab oo sheegtay Mas’uuliyadda dilka Xildhibaan ka tirsanaa barlamaanka Puntland – Radio Daljir
Maajo 9, 2015 8:15 b 0
Sabti, May 09, 2015 (Daljir) — Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda dilkii Xildhibaan, Siciid Xuseen Nuur oo ka tirsanaa baarlmaanka Puntland, kaasoo ay kooxo hubeysan xalay ku toogteen Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
War-saxaafadeed ay soo saartay Al-shabaab ayay ku sheegay inay dilkaas iyagu mas’uul ka ahaayeen, ayna sii wadi doonaan ugaarsiga ay ku hayaan xildhibaannada ka mid ah golaha baarlamaanka maamul-goboleedka Puntland.
Xildhibaan Siciid Xuseen Nuur ayay kooxo hubeysan oo Al-shabaab ka mid ah toogteen xalay, kaddib markii uu kasoo baxay masjid uu salaaddii Maqrib kusoo tukaday, iyadoo lala dilay mid ka mid ah ilaaladiisa.
“Ciidamadeenna gaarka ah ayaa fuliyay dilka xildhibaanka Puntland ka tirsan loogu geystay Waqooyiga Gaalkacyo. Weerarrada noocan oo kale ahna waan sii wadaynaa,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay Al-shabaab soo saartay.
Sidoo kale, xildhibaanka oo khudbad ka jeediyay masjidka ayaa la sheegay inuu shacabka ku nool degmada Gaalkacyo ka dalbaday inay si wadajir ah uga hortagaan kuwa dhibaa-tooyinka kawada degmadooda.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland, C/kariin C/llaahi Xaaji Camey oo isna ka hadlay dilka xildhibaanka ayaa sheegay inay ka dambeysay Al-shabaab ayna kula xisaabtami doonaan dilka ay xildhibaanka Puntland u geysteen.